Global Voices teny Malagasy » Torohevitra fanoratana isankerinandro: Ny fitsipika amin’ny fitanisàna avy ao amin’ny tambajotra sosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Torohevitra fanoratana isankerinandro: Ny fitsipika amin'ny fitanisàna avy ao amin'ny tambajotra sosialy
Voadika ny 31 Oktobra 2019 18:19 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, Fomba fanoratra
Sary avy ao amin'ny Wikipedia
Angon'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fanoratàna sy famoronana tatitra ato amin'ny Global Voices ireo Torohevitra Fanoratàna Isankerinandro. Atolotr'i Oiwan anao ireo torohevitra ho an'ny volana Oktobra, toniandahatsoratry ny faritra Azia Avaratra-Atsinanana.
Nanova tanteraka ny tontolon'ny fanaovan-gazety ireo tambajotra sosialy tamin'ny fanomezana ny olona ny fomba fanaparitahana haingana ireo loharanom-baovao maro eny an-toerana sy ny fanaparitahana vaovao ho aminà mpijery bebe kokoa. Amin'izany ihany, ho an'ny tatitra ataony dia afaka mampiasa ireo loharano eny an-toerana ihany koa ireo mpanao gazety matihanina .
Hita indrindra izany mandritra ireo loza voajanahary na loza mahafaty. Mipoitra haingana kokoa ao amin'ny tambajotra sosialy ireo sary sy lahatsary avoakan'ny olontsotra, fa tsy toy ny an'ireo haino aman-jery mahazatra .
Ho an'ireo mpanao gazety matihanina, fanamby iray ny famantarana raha toa ka mendri-pitokisana ny loharanom-baovao iray ao amin'ny tambajotra sosialy (manana fehezana taridàlana natokana ho an'ny fanamarinana ny votoatin'ny tambajotra sosialy  ny Global Voices). Fa rehefa mitanisa avy ao amin'ny tambajotra sosialy ianao, misy zavatra hafa mila jerena fanampin'ilay olana amin'ny fahamarinana, toy ny endrika maha an'ny daholobe/manokana an'ireo tambajotra sosialy.
Tsy voatery midika hoe manaraka fitsipika ny ara-dalàna
Mazava ho azy, misokatra ho an'ny daholobe ny Twitter ary manana ny safidy ny hanova ny momban'ny hafany ho lasa ho azy manokana ireo mpampiasa azy. Fa ny maha ho an'ny daholobe ny zavatra iray dia tsy voatery midika hoe manaraka fitsipika ny fampiasàna izany. Marina fa ho an'ny olana saropady toy ny fanafihana ara-pananahana na ny famonoantena, tokony hitandrina ny olona rehetra (fa tsy ireo mpanao gazety ihany) amin'ny fizaràna ilay hafatra amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa. Tsy voatery hidika foana hoe manaraka fitsipika ny ara-dalàna , hoy ny blaogera Tauriq Moosa. (Pao-tsatroka ho an'i Sahar sy Lauren tamin'ny fanasongadinana ity adihevitra ity.)
Ahatsiarovako ilay vehivavy pelaka iray namako izay ary vao niseho tamin'ny Facebook vao herinandro vitsivitsy izay ity resaka ity. Nitandrina be izy tamin'ny fiazaràna fanambarana iray tao anatin'ny hafatra izay nilaza fa nanafina izany hafatra izany tamin'ny reniny izy ary nangataka ireo nahita ilay hafatra mba tsy hizara izany na hamerina hamoaka izany. Avy amin'ny fiofanany matihanina amin'ny fanaovan-gazety izany fitandremana izany. Nanazava izy taty aoriana fa na dia efa ahiany ho mahafantatra ny fironany ara-pananahana aza ny reniny, tsy tiany ny hiaina tsindry izay mety hisy raha toa ka zaraina amin'ny mpijery bebe kokoa ilay hafany. Kanefa kosa, fanambarana ara-politika tsy maintsy ataony ny “fisehoana’ imasombahoaka tao amin'ny Aterineto.
Milaza amintsika indray ilay fisehoan'ny namako tamin'ny daholobe ankoatra ny reniny fa tsy vitan'ny hoe ho an'ny rehetra ny tambajotra sosialy; fifangaroana mibaribarin'ny an'ny daholobe sy ny manokana, ny an'ny tena manokana sy ny sosialy izany. Mamaky ireo hafatry ny namako eny amin'ny tambajotra sosialy ihany koa aho izay iresahan'izy ireo mikasika ireo aretiny. Maro ireo mangataka fanohanana amin'ny ady manokana ary tsy maniry ny halaza noho ny aretiny. Mila mitandrina amin'ny fahazoana ny alalana avy amin'ireo mpanoratra isika vao mampiasa ireny fitanisàna ireny ao anatin'ny fitantarana mivoaka lavitra amin'ny fikasàn-dry zareo tany am-piandohana.
Ankoatra ilay endrika maha an'ny daholobe/manokana ananan'ny tambajotra sosialy, olana ara-pitsipika iray hafa tokony horesahantsika ny resaka ara-politika eny amin'ireo vondrom-piarahamonina eny an-toerana rehef mitanisa zavatra avy any anaty tambajotra sosialy.
Raha ny mikasika an'i Shina manokana, ampiharin'ireo tambajotra sosialy ny rafitra fandraketana ny tena anarana. Noteran'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ireo mpampiasa Aterineto ho tomponandraikitra manoloana ny lalàna amin'ny zavatra lazainy an-tambajotra. Na dia manampy amin'ny fanamarinana aza izany, satria tonga dia afaka amarinina sy hitan'ny rehetra ny mombamomba ireo mpandahateny, indrindra ireo olomalaza fanta-bahoaka, ankavitsiana aho no mba miresaka amin'ireo mpanoratra mba hangataka aminy ny hitanisàna azy ireo na hangataka fanehoankevitra fanampiny aminy, indrindra satria mety hiteraka olana ho azy ireo ny fiseraserana amin'ny mpilaza vaovao any ampitan-dranomasina.
Fanampin'izany, rehefa mitanisa mpampiasa aterineto tsotra izay tsy mamoaka ny maha-izy azy marina ao amin'ny mombamomba azy aho, tsy dia apetako ao loatra ny anaran'izy ireo rehefa mitsikera ny manampahefana ireo fitanisàna. Na dia afaka hahafantatra ny fiavian'ilay hafatra amin'ny alalan'ny fanadihadiana aza ireo manampahefana, afaka miaro tena ireo mpanoratra amin'ny fanamarinana fa mety avy amin'ireo namerina nibitsika ilay hafatra ireo fitanisàna ireo, fa tsy nikàsa ny hanaparitaka izany izy ireo.
Raha ny marina, nahatsikaritra aho fa maro ireo blaogy mpanelanelana/mpampita, izay taloha zatra nitanisa nivantana avy tamin'ireo fanehoankevitra an-tambajotra, no nanajanona izany fomba izany mba tsy hiteraka olana ho an'ireo mpampiasa aterineto. Manahirana ahy foana ny fanontaniana hoe mety hiteraka olana na tsia ho an'ireo mpampiasa aterineto ve ireo fitanisàko rehefa manoratra lahatsoratra mikasika an'i Shina ato amin'ny GV aho. Matetika ny valinteniko dia miankina amin'ny zava-misy, ilay olana (hatraiza no maha-saropady azy), ny tontolo politika, ny mpanoratra (raha toa ka tonga saina amin'ireo mety ho vokatr'izany ilay olona) ary ny hoe hatraiza no mety ho tratran'ilay hafatra.
Asa marobe tsy hita pesimpesenina no miatrika olana sahala amin'izany, toy ny free Veibo, izay manohana ireo lahatsoratra voasivana ao amin'ny Weibo ary mamadika azy ireny ho hitan'ny daholobe, ary koa hetsika fanentanana maro mifandraika amin'ny zon'olombelona. Samy manana ny laharam-pahamehany avokoa ireo tetikasa tsirairay avy ireo ary manao safidy sarotra amin'ireo soatoavina mifanohitra. Heveriko fa izany no fototry ny fitsipika — tsy fandraisana fanapahankevitra maivamaivana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/31/143861/
 fanamarinana ny votoatin'ny tambajotra sosialy: https://community.globalvoices.org/guide/editorial-guides/toolbox-for-authors/verifying-social-media-content/
 misokatra ho an'ny daholobe ny Twitter : http://gawker.com/twitter-is-public-1543016594
 Tsy voatery hidika foana hoe manaraka fitsipika ny ara-dalàna: http://bigthink.com/against-the-new-taboo/hey-journalists-just-because-somethings-public-doesnt-mean-its-ok-to-use-it